Adiny firy isan-kerinandro no tokony hivezivezena amin'ny fiofanana? - Bisikileta
Tena > Bisikileta > Drafitra fanofanana momba ny bisikileta - fanontaniana sy valiny voatanisa
Drafitra fanofanana momba ny bisikileta - fanontaniana sy valiny voatanisa
Adiny firy isan-kerinandro no tokony hivezivezena amin'ny fiofanana?
HO AN'NYmpitaingina bisikiletymatetika mitaingina 20-30ora isan-kerinandro. mpitainginaTrainingho an'ny hetsika ultramarathon dia mety hiditra bebe kokoa aza. Ireo mpihazakazaka fialam-boly (sokajy 3, 4, 5 ary tompony) dia mazàna ao amin'ny 10 isan-kerinandroORA, na dia manana kalitao 5 na 7 aza ny sasanyORAraha fohy ny hetsika ataon'izy ireo.
Ka inona no tena ataon'ny pro? (mozika mihomehy) Eny, mba hanaovana izany dia mila mijery kalandrie feno fifaninanana isika. Ny matihanina sasany dia mitaingina ny Grand Tours rehetra mandritra ny 60 ka hatramin'ny 90 andro isan-taona. Ny pro hafa dia afaka mitaingina latsaka kely, 40 ka hatramin'ny 70 andro, izay ahitana klasika iray andro na hazakazaka dingana efatra ka hatramin'ny 10 andro kely kokoa mandritra ny vanim-potoana.
Mpandeha maro no hifaninana amin'ny tany malalaka sy tsy dia be havoana, raha maro amin'izy ireo no hifaninana amin'ireo tendrombohitra feno havoana mahery setra. Mba hamaliana ny fanontaniana, inona no tena ataon'ny matihanina? Tsy mora izany. Izy ireo dia manao isan-karazany isan-karazany.
Na izany aza, manana zavatra iraisana izy ireo: ny faharetany. Ny ankamaroan'ny hetsika bisikileta matihanina dia maharitra adiny efatra na enina na 180 ka hatramin'ny 260 kilometatra. Ny matihanina noho izany dia tsy maintsy miofana amin'ny fiaretana tsara amin'ny tany isan-karazany.
Ny mpamily sasany dia mahay mandehandeha ary mila manampy azy bebe kokoa amin'ny fampiofanana azy ireo raha mahay kosa ny hafa. dia hanala ary noho izany mila mifantoka bebe kokoa amin'izany. Ny anjara asan'ny mpamily sasany dia ny hiasa ho an'ny ekipa ary tsy dia hihazakazaka ho an'ny fandresena izy ireo.
Noho izany, ny fiofanana ataonao dia tsy maintsy mahafeno ny fepetra takiana sy ilaina amin'izany. (jazz malefaka) Ohatrinona no tokony hampiofana ny pro? Izany dia miankina amin'ny vanim-potoana iainan'izy ireo mandritra ny vanim-potoana. Na dia tsy isaina ho fiofanana aza ny hazakazaka dia misy fiatraikany amin'ny vatana izany, noho izany dia mety amin'ny fotoana faratampony ny matihanina dia mety tsy mila mampiditra fiofanana fanampiny miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fanarenana mihitsy.
Ny maharatsy an'io, mazava ho azy, dia amin'ny fotoana sasany dia tena mila mampiasa vola amin'ny bisikileta ianao Jereo herinandro miverina mandritra ny 30 ka hatramin'ny 40 ora amin'ny fiofanana bisikileta mandritra ny vanim-potoana fananganana iray manontolo. Na eo anelanelan'ny sakana fifaninanana na mandritra ny vanim-potoana ririnina. Tadidinao ve ny Volan'ny Monster nataon'i Chris Reams tao Strava? Taiza no nahavitany manodidina ny 140 ora sy 4.400 kilometatra? ity dia volana goavambe, na iza na iza fenitra, manasongadina ny asa mafy ataon'ny mpamily matihanina iray mba hahavelomany amin'ny vanim-potoana fifaninanana amin'ny ambaratonga avo indrindra. (jazz malefaka) Ka maninona no tsy maintsy miofana daholo ny pro? Azo antoka ve fa afaka mipetraka sy miala sasatra ianao? tena manan-talenta izy ireo.
Angamba ny tiako holazaina dia hoe miasa mafy sy manolo-tena. Tsy misalasala ny talenta aho, fa tsy misy fomba hahatratrarana ny tampony raha tsy manao asa mafy amin'ny fotoana iray. Andro fiofanana manaraka dia manampy amin'ny fanatsarana ny tsy fiovan'ny fahombiazana.
Manatsara ny fotoana fanarenana izy ireo ary manohitra ny havizanana. Ny elanelam-potoana ao anatin'ireto fampiofanana ireto dia hanampy amin'ny fanamafisana ny tanjaka sy ny aerobic fitness ilaina hitazomana ny bisikileta hiasa mafy toy izany, ary ny elanelam-potoana miverimberina dia hanampy amin'ny fanoherana ny harerahana hozatra amin'ny bisikileta hampivelatra ireo matihanina? Eny, ao no misy ny hakanton'ity fanatanjahantena ity. Ao anatin'ny elanelam-potoana mety sy amin'ny fotoana sasany amin'ny taona, ny matihanina dia afaka mampiofana saika na aiza na aiza.
Ohatra any an-tendrombohitra. Hisy ny fotoana amin'ny taona iray ilain'ny matihanina mandeha amin'ny toerana iray hampiofanana. Angamba ho camper amin'ny toerana avo na famerenan'ny kilasika belza.
Angamba mila làlana misimisy kokoa ianao amin'ny fampiofanana sprint na raha mpihanika tendrombohitra ianao dia mila mandeha any an-tendrombohitra raha te ho matotra amin'ny fiakarana, elanelam-potoana izay manohitra ny hery misintona, fa amin'ny ankapobeny ny matihanina dia afaka manome fahafaha-mandanjalanja kely rehefa mifidy. aiza no manao fanatanjahan-tena; na izany aza, ho hitanao fa ny matihanina dia saika azo atao foana rehefa mandeha any amin'ny toetr'andro mafana kokoa sy maina kokoa, satria iza no tena te ho lena sy mangatsiaka rehefa tsy tena mila. (jazz malefaka) Zavatra iray no azo antoka, bisikileta be ireto matetika, saingy zavatra hafa no ataon'izy ireo? Arakaraka. Ny mpamily sasany dia hanao fianianana amin'ny hery fanampiny sy fotoam-pivarotana fanampiny ao amin'ny gym na sekoly fanatanjahan-tena.
Azo antoka fa toa malaza io rehefa miverina avy maratra na manandrana misoroka ratra sy manangana hozatra. Ny sasany dia mety misafidy fanatanjahan-tena kely kokoa amin'ny alàlan'ny filomanosana amin'ny hazakazaka, amin'ny hazakaza-dàlana na amin'ny ski hafa. Mahalana ny mahita pro izay tsy manana farafaharatsiny fivoahana hafa hafa ho an'ny fanarenana azy ireo, saingy azo antoka fa tafiditra ao anaty fandaharam-potoana voarindra sy voarindra tsara. (Jazz malefaka) (mitaraina noho ny fanaintainana) Mazava ho azy fa mampiofana mandritra ny ora maro ny Pro, nefa midika ve izany fa tokony? Ataoko angamba fa tsy izany.
Raha tsy mikasa ny hanao hazakaza-voly fanatanjahan-tena mandritra ny fito andro ianao na zavatra mitovy amin'izany dia mety tsy dia ilaina loatra ny fampiofanana toy ny mpomba azy fa alao ireo fitsipika noresahintsika teto androany ary ampiharo amin'ny bisikiletanao manokana izany. Izany dia manome anao programa voadinika tsara sy voarindra ary tombony azo avy amin'izany. Ity lahatsoratra ity dia nanome anao fahatakarana tsara kokoa ny antony hampiofanana ny mpomba ny fomba fanaovany izany.
Mba hisorohana ireo lesoka ara-panatanjahantena enina, tsindrio eto, fa omeo ankihibe aloha.
Ahoana no fomba tokony hampiofanana ny mpandeha bisikileta amin'ny bisikileta?
Drafitra fanofanana amin'ny bisikiletaHO AN'NYIreo vao manomboka
Ny tapa-bolana voalohany dia momba ny fahazoana misambotrabisikileta, ka atombohy amin'ny tsingerina 10 minitra roa mandritra ny fitsangantsanganana roa voalohany, vita amin'ny tsingerina 20 minitra amin'ny faran'ny herinandro.
Avereno ny herinandro 1.
Amboary mandritra ny 15 ka hatramin'ny 20 minitra mandritra ny andro roa natokana natokana ho anao.
Raha te-hanomboka amin'ny bisikileta ianao ary misy ny tena fahaiza-manao fototra dia te-handrakotra azy ianao. - Androany dia hifikitra amin'ny fotony fotsiny isika, ka raha manomboka mandeha bisikileta voalohany ianao dia ity no lahatsoratra ho anao. (Hira fifaliana) Andao hanomboka eo am-piandohana.
Mialà amin'ny fotoana voalohany. Heverinay fa ny bisikiletanao dia napetraka amin'ny habeanao ary milamina ny zava-drehetra. Avy eo ianao dia te-hametraka ny bisikiletinao 12 metatra miala ny sisin-dàlana.
Amboary tsara ny vatanao. Amporisihinay ny toeran'ny telo amin'ny Legis tianao indrindra. Toy izany ihany, avy eo tazony ny kitondro sy ny lasely, ampifanantony aminao ny bisikileta, esory ny lasely ny tananao ary ahodiho ny tongotrao eo aloha.
Raiso izao ny freins roa, ampioreno ny lanjanao mihoatra ny bisikileta, apetraho amin'ny tongotr'ilay mandroso ny tongotrao tsara indrindra, atodiho eo amin'ny lasely ny lamosinao, jereo ny sorokao mba hijerena ny fifamoivoizana ary afaka mandeha ianao. Ka tsindrio ny tsipika eo anoloana anao m. Tazomy ny fandanjalanjana faingana amin'ny bisikileta. (mozika faly) - Ankehitriny rehefa eny am-piasana isika dia fotoana mety izao hanombohana mieritreritra ny fomba hijanonana.
Ankehitriny io dia tena fahaizana tena manan-danja hiantsoana, indrindra ny fomba hijanonana amin'ny fifehezana. Mety hitatra amin'ny fotoana sy ny modulasi izany. Ny herin'ny braking dia ampitaina amin'ny alàlan'ny kodia eo aloha.
Azonao atao ny mizaha toetra izany amin'ny alàlan'ny fandehanana manaraka ny bisikiletanao ary amin'ny fampiharana tanteraka ny frein ao aoriana. Jereo izay manjo ny mozika any aoriana) Avereno izao amin'ny alàlan'ny fampiharana tanteraka ny frein eo aloha. Inona no mitranga? Ny vodin'ilay bisikileta dia hanomboka hiala amin'ny tany, midika izany fa tsy ho afaka hampiditra hery mahery vaika intsony ianao amin'ny kodiarana any aoriana.
Eny ary, tafahoatra izany. Mihatra ihany anefa ireo fitsipika ireo. Raha te hiadana ianao dia tena ilaina tokoa ny mahafehy ny freins eo alohany.
Ankehitriny ny fampiharana dia tonga lafatra. Fa ny fanekena ny fotoana sy ny elanelany ilaina hampiatoana dia manakiana tokoa ny fialamboly, haingana, ary mahazo aina bisikileta. (Tsindrio kodiarana bisikileta) Aza mitsahatra mizaha làlana maro samihafa sy ny arabe samihafa arak'izay azonao atao mba hahafantaranao hoe ohatrinona ny fonja omenao anao isaky ny serivisy - ary izany dia mitarika anay amin'ny zavatra mety hampiasainao ny teknikan'ny fanaovanao fanamboarana ilaina hifehezana ny bisikileta, fa zava-dehibe ny ahitanao ny marina.
Atombohy amin'ny fihazonana ny lanjanao mihoatra ny kodiarana satria hanome anao ny fangejana tsara indrindra eny an-dalana izany. Mba hanaovana izany dia te hametraka ny tongotrao ivelany ianao ary hametraka ny lanjany amin'ny sandrinao ivelany. Ary izany dia hanampy anao hihodina.
Raha ny tokony ho izy dia hampihatra an'ity lavitra ny fifamoivoizana ianao, toy ny amin'ny toeram-piantsonana lehibe, ary avy eo afaka manao valo toa ny hasehoko anao. (Mozika ambony) Ary avy eo ny zavatra tianao hatao rehefa mihazakazaka mivoaka ny curve ianao dia te hijoro ho an'ny hafainganam-pandeha lehibe indrindra. (mozika upbeat) - Mba hanaovana an'io, ny tongotrao mitarika eo amin'ny fidinana dia ny toerana roa ka hatramin'ny telo ora, miposaka fotsiny eo amin'ny lasely, tazomy mafy ny tohin-tànana nefa milamina rehefa miarina bisikileta mikisaka eo ambaninao ka aza manandrana miady aminy.
Ity teknika ity dia ampiasaina indrindra rehefa manafaingana fiakarana fohy na mitazona ny fiakarana amin'ny fiakarana mideza tokoa. Azontsika atao ny mampiasa hery bebe kokoa amin'ny pedal amin'ny pedal fa tsy rehefa mipetraka isika. Izany dia vokatry ny hery misintona indrindra.
Ny fijoroana dia mety ho fomba iray lehibe hanalefaka ny fiantraikan'ny lalana mikitoantoana ary hahatonga ny fitsangatsangananao ho somary mahazo aina kokoa. Ary amin'ny fotoana sasany, mety hanome anao fifehezana bebe kokoa aza izany. (mozika faly) Toy ny fahaiza-manao voalohany ihany, dia mamporisika anao izahay hahita toerana mangina lavitra ny fifamoivoizana. - Ireo dia fahaiza-manao fototra tena tsara hanombohana anao ary tsara hofehezina koa izy ireo. - Raha nankafizinao ity lahatsoratra ity ary hitanao fa mahasoa dia omeo zoro lehibe izahay ary raha te hahalala lahatsoratra bebe kokoa dia tsindrio eto ambany.
Rahoviana ianao no tokony hanao fiofanana fototra?
Afaka manomboka ianaofiofanana fototrana oviana na oviana amin'ny ambaratonga salama. Raha io voalaza io, raha manana tanjona ho avy ianao, dia te-handamina ny anaofiofanana fototramialoha ny fotoana homanaoazonao antoka fa vitanao ara-potoana ny zava-drehetra mba hahatongavanao amin'ny hetsika.22 des 2020
Eo am-piandohan'ny vanim-potoana fampiofanana mihazakazaka, na mpihazakazaka efa za-draharaha ianao na vao manomboka, ny foto-kevitra lehibe indrindra tokony hodinihina dia ny vanim-potoanan'ny fampiofanana mihazakazaka, ary vanim-potoana izay hampiala anao amin'ny vanim-potoana fanarenana. na ny dingana mipetrapetraka izay tsy dia nihazakazaka firy, tamin'ny fifehezana ny vatanao hiatrehana ny fampihetseham-batana manokana ilaina hatao, noho izany dia toa ilay fiofanana fototra azo antsoina hoe fampihetseham-batana ho an'ny fanazaran-tena ary eh ny singa fototra amin'ny fampiofanana fototra dia ny manangona faran'izay betsaka araka izay tratra, nefa mbola afaka sitrana ihany.
menaka oliva tsara ho anao
Ka ny fitsipika ankapobe momba ny fampiofanana fototra dia ny tsy manampy mihoatra ny folo na dimy ambin'ny folo isan-jato amin'ny volanao isan-kerinandro. Ny zavatra mahafinaritra amin'ny fomba mihazakazaka sy mandeha dia indraindray afaka mihoatra ireo isa ireo ianao, afaka manatsara ny kilometatrao amin'ny 2025 isan-jato isan-kerinandro. Aza mihantona amin'ny fampitomboana ny kilometatrao mandritra ny herinandro.
Azonao atao ny mandrefy mandritra ny folo andro na roa herinandro ary izany dia fantatra amin'ny fanovana ny tsingerinao tsy hita mba hifanaraka amin'ny karazana atleta misy anao. Fa ny BaseRunning amin'ny ankapobeny dia hazakazaka tsotra, hazakazaka fampandrosoana, ary ny tena zava-dehibe tadidy rehefa manao an'ity BaseRunning ity dia ity fanarenana ity. Ka manandrana mihazakazaka matetika araka izay tratranao ianao fa mbola miarina ary manandrama mihazakazaka araka izay tratranao.
Fitsipika ankamantatra tsara dia ny fahalalana an'io raha mitady hanatsara ny endrika hazakazaka ianao. Tokony hazakazaka matetika kokoa. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mihabe ny refesina, fa raha te hanana tanjaka ianao ary avy eo manandrana manorina amin'ny iray amin'ireo hazakazaka lava lava amin'ireo mihazakazaka lava kokoa, manandrama mampivoatra an'ity eh miadana.
Raha mikasika ny fihazakazahana dia ilaina ny mitadidy, eh ataovy ambany ny tahan'ny fitempon'ny fonao, noho izany tazomy hatrany amin'ny 70 eo ho eo ny tahan'ny fitempon'ny fo ambanin'ny 70 isan-jaton'ny ny tahan'ny fonao, ary tazomy ny fitehirizana ny fitepon'ny fony..tsy ny tahan'ny fitepon'ny fonao fotsiny no anton'ny fiovan'ny hariva, raha lazaina amin'ny teny hafa dia maka ny tahan'ny fitempon'ny fonao ianao, alao antoka fa maka ny tahan'ny fony indrindra ianao.
Fantatrao, ilay iray hitanao tamina fampihetseham-batana mahery vaika tao anatin'ny vanim-potoana akaiky ny fanazaran-tena nataonao, dia esorinao ny fitepon'ny fony, izay ny tahan'ny fo azonao voalohany amin'ny maraina rehefa tsara sy milamina ianao nefa mifoha tanteraka io isa ny tahan'ny fo farany io ary ampitomboy izay amin'ny isa fito aotra ary avy eo ampidiro ao indray ny fitepon'ny fonao fitsaharana, ka toa izao ny fitoviana, ny tahan'ny fitempon'ny fonao dia mihena ny tahan'ny fitepon'ny fony um ampitomboina aotra hatramin'ny teboka fito ary avy eo ary avy eo ovao ny tahan'ny fitepon'ny fony aorian'izay ary manome anao fetra ambony tsara kokoa hiasa ny tahan'ny fitempon'ny fonao, eh hahafahanao manao io fanazaran-tena tsotra io, na dia tsy dia haingam-pandeha aza ianao afaka manisa aza ah fitsangantsanganana ary ary fandehanana mafy ary ary mandeha mandritra ny 45 ka hatramin'ny 60 minitra ao anatin'ity fizotran'ny fiofanana ity, ndao lazaina fa ny halaviran'ny mora vitanao dia 11 minitra isaky ny iray kilaometatra na 10 minitra iray kilaometatra miakatra ary manomboka atahorana mandeha amin'ny 15 16 enimpolo minitra isaky ny kilometatra dia tena goo tokoa d fomba mampitombo bebe kokoa ny fotony.
Fampandehanana mihazakazaka Ny fihazakazahana dia tokony hitranga mandritra ny 4 herinandro farafahakeliny. Fantatrao ve? Amin'ny lafiny iray eo anelanelan'ny 6 sy 12 fihazakazahana fototra dia hanome anao fototra tsara ho an'ny fiofanana avo lenta. Jereo ny fomba sitrana amin'ny vatanao.
Ny lohalinao, ny kitrokelinao ary vetivety dia ho vitanao izany ampitomboy tsara kokoa ny volanao ny mpihazakazaka marathon ambony dia mihazakazaka 90 ka hatramin'ny 120 kilometatra isan-kerinandro ary ah hitan'ny ankamaroan'ny olona izany, eh . .. izy ireo dia nampitombo, nanomboka ny ny ny anjaranao kosa ny miha kely, rehefa tonga eo amin'ny 60 ka hatramin'ny 80 kilaometatra isan-kerinandro dia sarotra be ny mihazakazaka 80 kilaometatra isan-kerinandro, ary betsaka raha te hihazakazaka 60 kilometatra isan-kerinandro na mihoatra ianao.
Mety te hihazakazaka 2 isan'andro isan'andro ianao. Betsaka amin'ireo mpihazakazaka amiko no mihazakazaka amin'ny alatsinainy iray, angamba roa mihazakazaka amin'ny talata, mihazakazaka kely kokoa amin'ny alarobia, roa mihazakazaka amin'ny alakamisy. Avy eo dia manao andro fitsaharana izahay amin'ny zoma, manao asa kalitao amin'ny asabotsy maraina ary avy eo ity fihodinana faharoa amin'ny sabotsy tolakandro ary avy eo io hazakazaka lava io amin'ny alahady izay mety fomba iray handrafetana herinandro ary avy eo hosory menaka fotsiny io Avereno fotsiny ilay izy dia ho hitanao raha vao manomboka manampy ny kalitao ianao, tsy mora ny mitazona ny haavon'ny haavony ka mitandrema rehefa mifanerasera aminy.
Ny bisikileta 30 minitra ve dia ampy isan'andro?
Ny mitaingina soavaly dia mety hanana endrika sy habe isan-karazany, fa raha tena terena mandritra ny fotoana ianao dia afaka mitaingina fiara afaka 30 minitra. Izahay dia nieritreritra fa hanandrana ary hizaha raha afaka mahazo mitaingina mety ao anatin'ny antsasak'adiny fotsiny izahay, manadihady amin'ny fampiharana gcn izay tiana tianao. Satria tsy mitovy amin'ny olona ny toe-javatra, dia hasehonay anao ny ohatra tena fiainana amin'ny ataonay mpanelanelana gcm raha tsy manana afa-tsy 30 minitra hanaovana kiraro gocycling itapenlets mandritra ny 30 minitra izay tsy dia ela loatra izahay. ny lalana.
Nieritreritra aho fa haharitra 30 minitra vao mivoaka ny varavarana miaraka amin'ny akanjoko eo amin'ny Mypike, tsy misy dikany ho ahy izany fotoana tena mendrika izany ao anatin'ny 30 minitra ao amin'ny turbo miaraka amin'ny fanovana sy ny fandroana aorian'ny fivoriana fohy 2040s sy Hanao izany matetika araka izay azo atao fotsiny aho amin'ny alàlan'ny fanamainana sy fampangatsiahana mba hinoako fa afaka manao set 10-15 izay azoko atao mba ho voalamina ka handeha aho ary hiomana hanamboatra ny fitaovako sy ny Vonona ny bisikileta okay heveriko fa ity no zavatra haingana indrindra nifindrafindra keliko roa minitra lasa teo ary ny fotoana kitihana tao amin'ny garazy dia natomboko ny fivoriana nataoko ary tsara lavitra aho eo am-bisikileta ary efa ho efatra minitra no nandrasana, saingy Mitaraina aho fa tena mila mamadika ny mpankafy tokoa aho satria tsapako fa mafana be izao, ka ho raisiko an-tsaina izany, okay, ka izao aho efa-minitra sy 30 segondra lasa mafana, izaho nieritreritra 20 segondra alohan'ny hanombohako ny ezaka voalohany nataoko, okay, anjarako izao no mahatsiaro ho tsy dia voageja kely loatra ny tiako holazaina fa izaho na dia tsy nanana ny hafanana tsara indrindra aza aho matetika 10-15 minitra tsara fa mieritreritra aho fa hiditra amin'ireo fananana voalohany ireo aho dia ho entiko amin'ny voalohany somary mora ary avy eo miditra ao aminy ka manana efatra aho segondra ka aleoko mandeha lavitra ny ankamaroan'ny fotoana tsy fantatro indray mandeha, andro amin'ny herinandro io, ka omeo aho 30 minitra ary fantatrao fa ho fety mamaky fo izany raha mangatsiaka ny any ivelany ary tsy tiako izany any ivelany any aho dia lava loatra aho sa misy kasaiko hatao miaraka amin'ny fianakaviana. Fantatro fa tsy maintsy ataoko haingana izany ka matetika aho no mampiditra ny fitohanan'ny fifamoivoizana hiditra ao amin'ilay faritra, mila miova, tsy maintsy mamely azy isika, tsy maintsy mamono ny tanjona tsara isika rehefa mivoaka ny varavarana, tsy misy korontana Manodidina ny roa telo minitra fotsiny handefasana ny vatokala amin'ny tongotro hanafanana, hahazo aina amin'ny bisikileta ary avy eo hafainganam-pandeha 120 hatramin'ny 140 mandritra ny dimy minitra fotsiny mba hampihetsi-po ahy ka hiomanana amin'ny fampihetseham-batana aho afaka manao izany afaka fotoana fohy, Ka manana telo minitra izahay, ity dia nanindry ny famantaranandro mba hitsanganana fotsiny. Mandritra ny dimy minitra manaraka dia te hihazona cadence mahafinaritra sy avo aho ary tsy te-hangeja ny hozatra loatra, indrindra raha tsy manam-potoana be ianao dia tsy te hifantoka amin'ny fifehezana an'i Biggear hahazoana ny tahan'ny fo avo be dia be fotsiny ianao mila tadim-baravarana mangatsiaka iray, mitazona ny hafainganam-pandeha avo lenta amin'ny rafi-piaramanidina fa tsy manasongadina ny vatana iray manontolo izay tonga ao anatin'ny minitra vitsy dia mety amin'ny mitaingina ao anatin'ny 30 minitra dia ho sarotra izany, saingy heveriko fa azo tanterahina ary tiako ny handray izany ho fotoana iray hananana bisikileta mahafinaritra fotsiny, hamelatra ny tongotro, hampihetsi-po ny havokavoko, hiara-miaina amin'ny natiora, fotoana milamina eo afovoan'ny andro fiasana mety mandreraka tokoa yeah eny, androko dia manahirana, tsara kokoa izy ireo, ovao ny fitafianao.
Tazomy, tsy eto ianao, mitadiava sombin-doha fiarovan-doha kely faharoa, vonona aho, tsy eo intsony, mivoaka ny varavarana aho, eny an-kalamanjana aho nivoaka izao, naharitra roa minitra aho vao nivonona satria notapahako teo am-baravarana tamin'ny bisikileta rehetra ireo faveriko namela 13 minitra ny fotoana hitondra fiara izay lalana iray no hataoko amin'ireo arabe eo an-toerana, ary nataoko izany satria tsy te hisafidy loop izay mety ho lava kokoa noho ny mety ho jerena amin'ny taratasy, ary satria midika izany fa fantatro fa mila mihodina aho ary miverina mba hahafahako miverina ara-potoana, ka raha manao 30 aho minitra? amin'ny lalana iray 13 minitra miverina dia ny 26 minitra ny fotoana fivezivezena rehetra ananako mba hahavonona ireo roa minitra ireo, omeo roa minitra fanampiny hanovana aho avy eo satria manana fivoriana tena lehibe aho aorian'izay, noho izany dia mila mahazo antoka aho fa mahazo tafaverina ara-potoana ka tokony ho tsara ny mitaingina kalitao rehetra ao anatin'ny 20 minitra26 minitra mandram-potoana nandosirako nandritra ny antsasak'adiny aho nidina kiraro bisikileta saingy tsy raharahako nanapa-kevitra ny handray hira iray momba ny fanoratana momba izany aho nahazo kiraro basikety lena lena mando ary tena nila ahy hihira ho an'ny bluesnow ny fampihetseham-batako mandritra ny 30 minitra, hivoaka any ivelany aho ary hiakatra havoana vitsivitsy ao amin'ny fandroana toerana ipetrahako satria tena akaiky izy ireo ka manantena aho fa afaka manao zavatra tsara 10 mins an'ny fiezahana mafy vo2 max amin'ity varavarankely ity, inona no tokony hataoko? satria mila 10 minitra vao vonona, ka 20 minitra sisa tavela hihanika inutes, ny salan'isa dia 10, sarotra izany, nefa mieritreritra aho fa afaka manao repoblika mendrika roa eto, manodidina ny 380 400 watts ary izany dia eo amin'ny 10 minitra tamin'ireny karazana lahateny vo2 max endstop ireny dia tao amin'ny turbo 19 sy sasany minitra aho izao dia najanoko ny isan'ny ezaka 20 segondra nataoko fa manomboka mifoha aho ary mianiana, mitombo ny fitempon'ny foko, noho izany dia mahazo fampihetseham-batana tsara aho mieritreritra fa Mahafeno fepetra bebe kokoa aho amin'izay, izany dia midika dimy minitra hafa oh tsia mila milamina aho eny hafa dimy ary avy eo mihodina roa minitra fotsiny ny tongotro ary jereo raha afaka mihetsika ao anatin'ny telo minitra fotsiny aho izay ho eo amin'ny zava-drehetra tsara, andao hanao ezaka bebe kokoa izay tadiaviko izao, fa folo minitra mora fotsiny aho no teny an-dàlana, vitako ny nahavita ity faharoa ity, nanao ny repeko faharoa ary mihazakazaka ny famantaranandro manodidina ny 26 minitra izay midika fa manana efatra minitra hodiako any an-trano aho ary hiova, hadalana izany Hevitra oh godoh, aleoko misolelaka kely ity mandritra ny fotoana fohy mba tsy hijanona mandritra ny fito minitra fa nieritreritra aho fa nijanona kely fotsiny satria nahita blackberry mahafinaritra. Midika izany fa matetika aho tonga eto amin'ny fararano mba haka azy ireo amin'ny voalohan'ny vanim-potoana mba ho marin-toetra ary ary tsikaritro fotsiny izy ireo eto dia mila mijanona aho ary manandrana fotsiny aho manandrana azy ireo be ranony nefa somary sosotra kely Raha afaka nijanona elaela kokoa aho tapa-bolana dia heveriko fa tsara ny hahafantarako azy na izany aza, mamaky tsara kokoa aho satria mandany fotoana sarobidy kely ity, tsara vintana aho manana an'ity dia kely ity mandritra ny fisakafoanana atoandro, milaza aminao ny tendrombohitra dia fiakarana mideza dia aza atao ambanin-javatra izany hatrany afovoan'i Myride sy Carrick amin'ny lobaka ary mahitsy eo amin'ny tetezana eny amoron'ny renirano izao ary rehefa hitanao ny toerana iray mahatazana olona mahafinaritra eto, dia nivonto be ilay renirano hoy aho. orana be dia be izahay ka toa maizimaizina manokana ity mena ity izay tsy nahy tampoka ity lakana mahantra ity, aza mieritreritra fa mandeha antsasaky ny adiny iray izy oh very kely aho, aleoko miverina satria tsara, miteny stratejika ny zotra ary raha ny marina dia efa nitondra kely aho lavitra satria teo amin'ny havoanan-dabozia aho, maharitra 30 minitra ny hahatongavako eto ary miakatra daholo ny lalana miverina, tsy ao anaty drafitra nataoko io, tsy nieritreritra an'izany aho, tsy noeritreretiko mihitsy ka dia tsy maintsy Raha hanao ity fihaonana ity aho satria fivoriana manan-danja tokoa izany, afindra mandritra ny 30 minitra dia vita tsara izany vao vitako ity fehezan-teny ity roa ambin'ny folo minitra farany 30 segondra dia hokapohiko mafy aho ary ho raisiko fitsaharana roa minitra dia ataovy 30 segondra daholo, dia vita ny roa minitra voalohany, afaka roa minitra aho izao ary hialana voly fotsiny, dia hataoko indray, roa minitra hafa. Tonga teto amin'ity lavaka fasika eto an-toerana ity aho mba hanaovana ezaka tsara fotsiny, mampientam-po ary manana fahafinaretana kely eny an-dàlana ho ahy ka tena tiako ny mandany 30 minitra amin'ny androko, toa ny maro aminareo eny amoron-dalana. dia tsy misy dikany, noho izany dia mbola manana 60 segondra sisa aho, avy eo hanao roa hafa mandritra ny roa minitra ezaka aho, avy eo hanao asa eny ivelan'ny bisikileta ihany koa, andao aloha hanomboka amin'ilay faharoa, andao handeha ny seta faharoa, manana roa minitra fanampiny isika ary avy eo dia hataoko ny setrako farany amin'ireo elanelam-potoana Vo2 izay tsy dia tadidiko loatra fa ity no nilaiko nilain'ny kiraroko ny bisikiletako ary nanadino lavaka lasitra telo hafa aho afaka manao izany bebe kokoa aza aho manao ezaka, avy eo afaka miantso aho dia manoro hevitra ny manafanana tsara foana ary miantso an-tariby tsara isaky ny manao session toa izao ianao, fa na nieritreritra aho fa nahavita izany, saingy mazava ho azy fa tsy nanao izany aho Tsy hidina 27 minitra ary tsapako fa ny cooldown roa minitra aorian'ny fivoriana mafy toy izany dia tsy ampy, ny tongotro dia mbola may ihany, ny fon'ny foko dia mbola avo dia avo ary raha miala amin'ny tongotra aho dia hankahala ahy ny tongotro rahampitso, noho izany dia mijanona eo amin'ny turbo mandritra ny minitra vitsivitsy fotsiny aho mba hialana sasatra tsara mba hahafahako manao ' tsy misy fanaintainana any aoriana, fa inona no noeritreretiko, telo minitra hivoahana sy handro? ary hita fa tsy nikasa izany tsara aho fa hiezaka mafy araka izay tratrako mody manohitra an'i Hillah Power ka vita ireo elanelam-potoana ireo, tonga izao ny fotoana hanaovana zavatra amin'ny asan'ny bisikileta raha apetrako ny bisikileta ary izao dia hanohy 20 segondra hafa aho ka raha mbola miverina aho izao dia hanohy ity ezaka ity, izao indray, mahatsiaro marary, huhso noho izany rehetra izany dia manana ny faritra iainako miaina tsy miala mihitsy aho tsy dia lavitra loatra ny trano aho dia misy ezaka farany ataoko, eo amoron-dàlana ihany no anaovako izany rehefa miverina any an-tranoko aho, 20 segondra marina izao, vitako ny nanandrana azy io tamin'ny fiakarana ary efa handeha hamonjy fodiana izao aho izao dia mieritreritra fa efa mazava be aho fa manana ora fijanonan'ny fiara mandritra ny 25 minitra ka manana telo minitra hodiako any an-trano, roa minitra, hanovana ahy, ary avy eo niverina tany miasa mandritra ny antsasak'adiny ka izao dia matoky aho fa ho hitako eo amin'ny latabako, ka vao vita ny fivoriako ary mety tsy nanao dia lavitra be indrindra aho, saingy fantatrao izay tsy maninona satria izaho ' m mivoaka manana rivotra madio ve aho ary somary voaofana aho dia tsara kokoa noho ny tsy misy indraindray amin'ny fiainana fa tsy manao zavatra isika satria tsy afaka manao ny zava-drehetra aleontsika manao na inona na inona toy izay manao zavatra kely ary fantatrao, indraindray daholo mila ataonao dia mora ny mivoaka any, manodinkodina ny tongotrao ary manandrana azy ary izany no mahagaga ody ka hiverina aho ary hanamboatra izany rehetra ho eo am-pandehanana mba hiverenako eo amin'ny sezako tokony ho minitra vitsy ary izaho fantatro fa efa nanao ny hafanako telo minitra aho nanao ny dingana kely vitako ary nanao ny roa minitra hatramin'ny roa minitra miala ny bisikileta aho ary mihazakazaka miaraka amin'ny sprint izao dia ho vitako ny hanao sprint farany farany hamita ity farany iray ka izay no 3 0 minitra amiko raha toa ka afaka mitsambikina avy eo ianao dia ataovy izay hahatsapanao tsaratsara kokoa fa hahazo ny ra mikoriana ao amin'ny atidohanao ianao dia hahatsapa tena miabo tsara ianao hahatsapa tsara fa manana zavatra kely ianao dia tsara kokoa noho ny tsy misy na inona na inona lazaina foana fa mifalifaly, matokia, misaotra anao nijery azy rehetra.
Manantena aho fa nankafizinao ity iray ity ary antenaiko fa nanome aingam-panahy anao handeha amin'ny bisikiletanao sy hankafy ireo dia kely kokoa ireo, saingy azafady mba ampahafantaro anay amin'ny fanehoan-kevitra etsy ambany raha manana tianao ho an'ny tsipìka kely tianao kokoa ianao? ataovy na fanofanana tianao na fitsangatsanganana kely tianao amin'ny làlambe toa ahy dia tena te handre anao toa anao rehetra aho ary azafady mba ampahafantaro anay amin'ny faritra fanehoan-kevitra etsy ambany, mahita anao tsara fotsiny, misaotra anao mijery ny rehetra ary mifalifaly mitaingina
Afaka mamoy tavy amin'ny kibo ve ianao amin'ny bisikileta?
Eny,bisikileta afakaVonjeovery tavy kibo, fa mila fotoana. Ny fanadihadiana vao haingana dia nampiseho tsy tapakabisikiletamety hanatsara ny ankapobenyfahaverezana tavyary mampiroborobo lanja mahasalama. nyhampihenaankapobenykibofanatanjahan-tena aerôbika somary mahery, toy nybisikileta(na anatiny na ivelany), dia mahomby hampihenatavy kibo.2 feb 2021
Ohatrinona ny lanja azonao very bisikileta 30 minitra isan'andro?
Harvard Medical School dia nitatitra olona 155 poundsafakamandoro kaloria 260 eo ho eo mitaingina fanatanjahan-tenabisikiletaho an'ny marina30 minitra. Olona 125 kilaovemandoro 210 kaloria amin'ny fanatanjahan-tena iray, raha olona 185 kilaovemandoro kaloria 311.27 apr 2019
Mampihena ny tavy amin'ny kibo ve ny bisikileta?
Eny,bisikiletaafaka manampyvery tavy kibo, fa mila fotoana. Ny fanadihadiana vao haingana dia nampiseho tsy tapakabisikiletamety hanatsara ny ankapobenymatavyvery ary mampiroborobo lanja mahasalama. nyhampihenaankapobenykibofanatanjahan-tena aerôbika somary mahery, toy nybisikileta(na anatiny na ivelany), dia mahomby hampihenatavy kibo.2 feb 2021
Mandra-pahoviana ny fampiofanana fototra?
Mihazakazakafototradia vanim-potoana iray - mazàna enina ka hatramin'ny 12 herinandro - ary miovaova arakaraka ny traikefanao amin'ny hazakazaka sy ny haavon'ny fahaizanao. Raha vao mihazakazaka ianao, ny fampiasam-bola amin'ny kilometatra mora amin'ny ezaka ifanaovana resaka dia hanangana aerobic matanjakafototraizay ahafahanao manomboka timer voalohanyTrainingdrafitra.10 Jona. 2015 g.
Azoko atao ve ny mamoy ny tavy amin'ny bisikileta?
Mandoro tavy ve ny bisikileta? Ie. Na dia ny anao azavavonyny hozatra dia tsy miasa mafy toy ny quad na glute-nao rehefa mitaingina, fabisikiletany natiora aerobika dia midika hoe may ianaomatavy.2 jan. Feb 2020
Mandoro tavy ve ny bisikileta miadana?
Aleo kosa maka amora, fa mitaingina lavitra indray mandeha isan-kerinandro, indrindra amin'ny vanim-potoana voalohany. Fitainganana lava (hatramin'ny adiny enina)handorobe dia bematavyary manome anao fiaretana tsara ho an'ny vanim-potoana amin'ny vanim-potoana. Aza adino, na dia 30 minitra amin'nybisikileta afakamanampy anaoverylanja, indrindra raha mandeha mafy ianao.25 Mey 2021
Mandra-pahoviana ny drafitra fanofanana amin'ny bisikileta ifotony?
Ny drafitra fanofanana ifotony, novolavolaina niaraka tamin'ny Veloptima sy InPursuit Coaching, dia maharitra 12 herinandro ary manome fotoam-pivoriana isan-kerinandro 3-5 isan-kerinandro hanampiana anao hanangana fototra fiofanana tonga lafatra.
Iza no ampahany tsara indrindra amin'ny drafitra fanofanana bisikileta?
Ny fototry ny drafitra fanofanana bisikileta mahomby dia napetraka mandritra ny dingana fototra. Arakaraka ny maha-ara-batana anao no manana ny ambony kokoa azonao anaovana ny FTP. Ny fomba mahomby indrindra hanaovana an'izany ho an'ny ankamaroan'ny bisikileta dia amin'ny alàlan'ny Sweet Spot Base.
Nahoana no zava-dehibe ho an'ny bisikileta ny fampiofanana ifotony?
Ny fiofanana amin'ny base dia ampahany manandanja amin'ny fiofanana amin'ny bisikileta rehetra satria mampiorina ny fahaizanao fototra, fiaretana ary fahaizanao aerobic. Ny fanofanana ifotony dia mazàna vita ao anatin'ny Dingana Basis.